बिद्युत ट्रान्सफर र पोलहरुको दुराबस्थाप्रति प्राधिकरणको ध्यान नजाँदा गल्कोटबासी आक्रोशित ! – ebaglung.com
२०७५ जेष्ठ १०, बिहीबार ११:५०	Home Slider, Top News, प्रमुख समाचार
बिहुँकोटमा जस्तो दु:खद घटना गल्कोट क्षेत्रमापनि दोहोरिन सक्ने सन्त्रास !
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७५ जेठ १० । गल्कोट क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । प्राधिकरणले गलल्कोटमा जडान गरेका अधिकांश ट्रान्सफर्मरको उचित तरिकाले ब्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउमा, घर नजिक भुँइ नै भेट्ने गरी ट्रान्सफर्मर र विद्युत प्रवाह भैरहेको तार हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई बाटो हिँड्न पनि डर छ । तर विद्युत प्राधिकरणले उचित चासो नदिएको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ ।
गत शनिवार विद्युत प्राधिकरणको चरम लापर्बाहीबाट बिद्युत पोलबाट करेण्ट प्रवाह भै काठेखोला गाउपालिकाको बिहुँकोटमा दईजना छात्राहरुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको दुखद घटना पछी गल्कोट क्षेत्रका बासिन्दा विद्युत प्राधिकरणको लापर्बाहीका कारण गल्कोट क्षेत्रमा कुनै पनि समय अकल्पनीय दुर्घटना हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिहेका छन् । बिद्युत प्राधिकरणको गैह्रजिम्मेवारीले गल्कोट क्षेत्रमापनि बिहुँकोटमा जस्तो दु:खद घटना दोहोरिन सक्ने सन्त्रास उत्पन्न भएको स्थानीयले बताए ।
गल्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ३ हटियाको प्रहरी चौकी देखि तल मध्यपहाडी लोकमार्गको छेउमा केटाकेटीले पुग्ने स्थानमा ट्रान्सफर्मर छ, स्थानिय सन्त बहादुर भण्डारी भन्छन् दैनिक रुपमा सयौको संख्यामा स्थानिय र बालबालिका हिड्डुल गर्ने बाटोमा अब्यवस्थित तरिकाले ट्रान्सफर्मर र तार राख्दा ज्यान नै जोखिममा राखेर हिँड्नु पर्छ ।
गाडी दुर्घटनाको जोखिम रहेको उक्त स्थानमा दुर्घटना भई ट्रान्सफर्मरमा ठोकिए जनधनको ठुलो क्षति हुने उनको भनाई छ । ट्रान्सफर्मर राखिएको पोल हुदै ३, ४ घरपरिवार आवतजावत गर्ने गरेको र समय समयमा करेन्टका झिल्का देखा पर्ने गरेको स्थानिय रमेश खत्रीले ईबागलुङलाई बताए । मैले आफना छोराछोरी बिद्यालय जाने क्रममा समय समयमा तारहरु छोएको देखेपछि बिद्युत कार्यालयमा यसको ब्यवस्थापनका लागी खबर गरेँ तर पनि यसतर्फ चासो नदिएको उनको गुनासो थियो ।
त्यस्तै गल्कोट नगरपालिका ९ बाँसखोलामा पनि लोकमार्गको आडैमा भुई नजिक ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । भुईबाट सजिलै पुग्न सकिने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको वडा अध्यक्ष तेज बहादुर थापाले बताए । वडाध्यक्ष थापाका अनुसार नोलाईट कार्यालयमा पटक पटक ब्यवस्थापनका लागी जानकारी गराए पनि सुनुवाई भएको छैन । उनले आफु वडा अध्यक्ष भएकाले तत्कालै जग्गाको ब्यवस्थापन गरि त्यसको ब्यवस्थापन गर्ने बताए ।
कुनैपनि समय दुर्घटना हुने सम्भावना छ, तर प्राधिकरणले वास्तै गर्दैन’ स्थानीयबासी भन्छन् बालबालिकालाई घरको काम छोडेर बिद्यालय छोड्न जानुपर्ने समस्या छ । ट्रान्सफर्मर र तार भएको ठाउँमा जान्छन् कि भनेर एक जना त उनिहरुलाई दैनिक छोड्न जानुपर्ने हुन्छ ।’
स्थानीय बासिन्दाले नोलाईट कार्यालयमा यसको बिषयमा जानकारी गराए पनि कार्यालय प्रमुख जीवन थापाले भने यसको काम विद्युत प्राधिकरण बागलुङले गर्ने र आफुले यसको बारेमा जानकारी नगराएको बताए । यसको लागी हामी पनि पहल गर्छौ, मिडिया र स्थानियले पनि पहल गनुपर्छ थापाले भनाई थियोे । गल्कोटमा भएका अधिकांश ट्रान्सफर्मर ब्यवस्थित नहुदाँ दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ ।
त्यस्तै हाल मध्यपहाडी लोकमार्ग हुदै प्रसारण गरिएको लाईनको पोल र तार समेत ब्यवस्थित नभएको गल्कोट नगरपालिका ३ का बासिन्दाहरुको गुनासो छ । तार र पोल ब्यवस्थापन नभएका कारण ठुला खाले सवारी साधनहरु आवतजावत गर्नका लागी समस्या देखिएको छ । पोलमा प्रयोग गरिएका पिन कोल्टे परेकोले तार फुत्किएर घरमा आउने सम्भावना देखिएको स्थानीयको भनाई छ । ।